Kulamo ku saabsan BBI oo dadweynaha loo qabanayo | Star FM
Home Wararka Kenya Kulamo ku saabsan BBI oo dadweynaha loo qabanayo
Kulamo ku saabsan BBI oo dadweynaha loo qabanayo
Xoghaynta qaran ee guddiga dib u heshiisiinta iyo mideynta shacabka ee BBI ayaa shaaca ka qaadday in toddobaadka soo socdo la billaabaya kulamo dadweynaha lagu fahansiinayo qorshaha sharci beddelka.
Guddoomiyaasha xoghaynta BBI ee kala ah Junet Maxamad iyo Dennis Waweru ayaa hoosta ka xarriiqay in deegaannada kala duwan ee dalka uu ka dhici doono ololo ballaaran oo ku aaddan hannaankan.
Labadan mas’uul ayaa hoosta ka xarriiqay in la qaaday wadadii aftida dastuuriga maadaama ugu yaraan 40 ka mid ah golayaasha ismaamullada dalka ay ansaxiyeen hindise sharciyeed lagu doonayo in wax looga beddelo xeerarka Kenya.
Junet Maxamad ayaa sheegay in ay rajeynayaan saddex toddobaad gudahood in baarlamaanka iyo aqalka sare ay ku ansaxiyaan hindise sharciyeedka BBI ka dibna madaxweynaha wadanka Mr. Uhuru Kenyatta uu saxiixo .
Waxaa uu carrabka ku adkeeyay in marka tallaabooyinkan laga gudbo ay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada wadanka ee IEBC ka sugayaan inuu shaaciyo taariikhda ay dhacayso aftida qaran.
Previous articleDHAGEYSO:BARNAAMIJKA DARYEEL XALQADDA 11-AAD